Tratra nanao kolikoly: any am-ponja ny polisy iray sy resevera ary mpamily taxi-be | NewsMada
Tsy misy indrafo! Nidoboka avy hatrany eny amin’ny fonjan’Antanimora, omaly rehefa natolotra ny fampanoavana ny polisy iray sy ny resevera ary ny mpamily taxi-be iray. Resaka kolikoly no antony nampidirana am-ponja azy ireo…
Noho ny fanaovana kolikoly ny heloka anenjehana ilay polisy niaraka tamin’ny mpamily sy ity resevera ity. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena, taxi-be iray no voasakan’ny polisy teny Ankadindratombo, ny alahady 15 jona 2019 lasa teo rehefa nanao fahadisoana. Nangataka fandaminana tamin’ilay polisy ilay mpamily sy ny resevera ka nanolotra vola ho tambin’ny fahadisoana sy tsy fanarahan-dalàna nataon’izy ireo. Tsikaritry ny polisy iray miasa avy ao amin’ny sampandraharaha misahana ny fanadihadina ireo polisy nanao fandikan-dalàna na IGPN (Inspection générale de la police nationale) izay nijoro tsy lavitra teo akaik’ilay toerana nisy ilay taxi-be nanao fandikan-dalàna anefa izany fihetsika rehetra izany. Nanaovana tatitra teo anivon’ny lehibeny ilay polisy momba ity fanahiana kolikoly nataony ity ka natolotra ny fampanoavana taorian’ny famotorana natao teo anivon’ny IGPN.
Polisy iray hafa koa naiditra am-ponja…
Fa niakatra fitsarana koa ilay raharaha nahavoasaringotra ireo polisy nikasi-tanana mpanao gazety teny amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Vokany, polisy iray nahazo fahafahana vonjimaika raha polisy iray hafa kosa notanana am-ponja vonjimaika amin’ity raharaha ity. Tsikaritra tato ho ato fa tena manadio ireo polisy mitsivalam-pandry ka mety handratsy endrika ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena ny eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. Antenain’ny rehetra fa mba tsy ho afo mololo ihany ny fanadiovana toy izao fa mba hitohy hatrany amin’ireo karazana fandikan-dalàna rehetra ataon’ireo mpitandro filaminana. Tsy amin’ny raharaha kolikoly toy izao ihany koa matetika no mahavoarohirohy ireo mpitandro filaminana fa indrindra amin’ny firaisana tsikombakomba amin’ny fanaovana asan-jiolahy, ny fampanofana fitaovam-piadiana ireo jiolahy. Antenaina mba ho mangarahara toy izao koa ny filazana ny tobi-miaramila nivoahan’ireny basy tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy ireny. Rehefa manadio dia aleo tena diovina hatramin’ny farany sy fongorina ifotony ireo mpitandro filaminana manaratsy endrika ireo namany tena miasa sy manolotra ny ainy ho an’ny tanindrazana satria tsy natao ho fieran’ny jiolahy ny mpitandro filaminana, araka ny ambetin-dresaky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ravalomanana Richard.